Ọ bụrụ na gị Target bụ ihe iPhone, Gam akporo na ị chọrọ ịhụ ihe videos na ha nwere ha na ekwentị na ihe videos ha na-eme mgbe ahụ ExactSpy-Spy Mobile Video na video akada mma bụ maka gị.
Lee niile vidiyo ha na ha na ekwentị
Lee niile vidiyo ugbua ha na ekwentị
Akwado CGM, SVG, EDC, EPS, PDF, SWF, WMF, XPS, EMF, EMF , EMZ, MP4, WMV, ASF, 3GP, 3G2, M4v, AVI faịlụ formats
30MB file size anọru ngwangwa video faịlụ na-ebugote
Ntak emi I Kwesịrị Iji Nledo na ha Videos
Onye ọ bụla na-ewe vidiyo na ha ama ma ọ bụ mbadamba. ExactSpy-Spy Mobile Video akada mma-enye gị kpọmkwem ndikụt mme vidio oge obula na ị chọrọ ozugbo gị ExactSpy online akaụntụ. ExactSpy nakwa captures vidiyo na ha na ekwentị ma tupu mgbe ExactSpy e arụnyere ekele akụkọ mgbasa ozi mma. Ugbu a ị chọrọ mgbe uche ọ bụla dị mkpa vidiyo na ha ekwentị ekele ExactSpy.
Ọ bụrụ na ị bụ nne na nna a, ọ bụ gị na ọrụ iji kwụsị ndị dị ize ndụ nke cyber egwu gị na ụmụaka nwere ike na-eche ihu. Gịnị ma ọ bụrụ na ha na-eme na-ekwesịghị ekwesị videos ma na-eso ha na ha enyi? Ị maara na ha nwere ike na-eji ike ha emegbu mmadụ cyber-? Ọ bụrụ na ị bụ azụmahịa nwe, ị maa adịghị chọrọ gị ọrụ nkiri nzuzo nzukọ n'azụ gị. ExactSpy ga-ekwe ka ị na-esochi nke ọ bụla video echekwara na lekwasịrị ngwaọrụ, eme gị aka ịmata ihe ọ bụla na-achọghị ọnọdụ na-etinye na a na-akwụsị na ya.
Spy kam video, Spy Mobile Video, spy video App, Spy video cam, spy video ndekọ
← Record égwu ojiji